‘क्वान्टिको ३’को अन्तिम भाग प्रियंकाकै लागि समस्या - NEPALI SANCHAR NETWORK : 24/7 Nepalese Radio from Melbourne Australia
मुम्बई– बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडाले अभिनय गरिरहेको अमेरिकी सो ‘क्वान्टिको ३’को अन्तिम भाग प्रियंकाकै लागि समस्या बनेको छ । सोमा देखाइएको एक दृश्यका कारण प्रियंका ट्रोलको शिकार बनेकी छन्।
प्रियंकाको यो सोको तेस्रो सिजनको टिआरपी रेटिङ पनि सोचेअनुरुप माथि जान सकेको छैन । अन्तिम भागको एक दृश्यमा भारतीयलाई मार्ने योजना बनाइरहेको देखाइएको छ । दृश्यमा बममार्फत उक्त व्यक्तिलाई मार्ने अनि सबै दोष पाकिस्तानलाई दिने योजना बनाइएको छ ।प्रियंकाका प्रशंसक र सोका दर्शकले यो कुरा मन नपराएपछि सामाजिक सञ्जालमा प्रियंकाविरुद्ध आक्रोश बढेको हो ।
गत जुन १ मा रिलिज भएको सोमा एमआइटीका एक अध्यापकले युरेनियम पाइरहेको देखाइएको थियो जुन युरेनियममार्फत उनले एक परमाणु बम बनाउँछन् । उनको उद्देश्य न्युर्योकमा हुन लागेको भारत–पाकिस्तानबीचको शिखर वार्तामा बम पड्काएर त्यसको दोष पाकिस्तानलाई लगाउने हुन्छ ।केहीले सोप्रति आक्रोश पनि व्यक्त गरेको छन् । ‘यो तल्लो स्तरको एपिसोडलाई मैले सम्झन सकेकै छैन । उनीहरू हामीलाई के देखाउन चाहन्छन्,’ एक दर्शकले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।
प्रियंकाले यो सोको तीन सिजनमा काम गरिसकेकी छन् । उनको एलेक्स पेरिसको भूमिकालाई दर्शकले पनि निकै रुचाएका थिए । केही दिन यता स्वदेशी तथा विदेशी मिडियामाप्रियंकाको प्रेम सम्बन्धलाई लिएर चर्चा परिचर्चा पनि भइरहेको छ । गत मेमा प्रियंकालाई अमेरिकी गायक निक जोन्ससँग केही स्थानमा सँगै भेटिएपछि उनीहरूबीच प्रेम अंकुराइरहेको चर्चा चलेको थियो । प्रियंका बलिउडमा भने करिब तीन वर्षपछि ‘भारत’मा देखिँदैछिन् । अलि अब्बास जफरको निर्देशन रहने फिल्ममा सलमान उनको जोडीकोे रूपमा रहनेछन्।
फिल्म र टिभी कार्यक्रमको शूटिंग ३१.
साधना कला केन्द्र पुतलीसडकको निमन्त्रणामा भारतकी.
अहिले मानिस धेरै नै व्यस्त रहने.
गायक रामकृष्ण ढकालले श्रीमती निलम शाह.